Chautari Daily » शनिलाई फुलमाला लगाएर बधाई दिइन् शान्ती श्री परियारले
काठमाडौं १६ कार्तिक / भर्खरै मात्र सम्पन्न मौलिक गायन रियालिटि शो आइएम ई नेपाल लोकस्टारको बिजेता बनेका रोल्पा शनि बिश्वकर्मालाई बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका शान्तिश्री परियारले फुलमाला लगाएर बधाई दिएकी छिन् ।
लोकस्टारको सुरुवाती दिनदेखिनै गायिका परियारले विजेता शनि विश्वकर्मालाई जिताउन लागि परेको देखिन्थ्यो’, अन्ततः सर्वाधिक भोटले शनि विश्वकर्मा पहिलो नेपाल लोक स्टार बने ।
को हुन नेपालको पहिलो लोक स्टार सनी?
काठ्माडौ, सनी विश्वकर्माको जन्म जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पाको जंकोटमा बुवा मनबहादुर र आमा मनकुमारीको कोखबाट २०५८ पौष २५ गते भएको हो । गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरेपछि लिबाङको बालकल्याण नमूना माविमा अध्ययन गरे । कक्षा १२ सम्मको अध्ययन भने दाङमा गरेका थिए ।
घरको आर्थिक अवस्था बलियो थिएन तर जेनतेन हुर्किने अवसर पाए उनले । ११ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक स्टेजमा गीत गाएका थिए । गाउँकै एक कार्यक्रममा गाउन जाँदा उनको स्वरको सबैले प्रशंसा गरे । ‘एक जनाले मात्र भनेको भए पत्याउने थिइन, सबैले भनेपछि हो कि भन्नेमा पुगें’, उनी भन्छन् ।
आमा बाबु र परिवारको मेहनतले उनी सानैदेखि लगनशलि बने । खासै नबोल्ने स्वभावका उनीभित्र अथाह प्रतिभा लुकेर रहेको छ । अहिलेसम्म संगीतको कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका उनको स्वर सुन्दा जो कोही पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छन् ।
लिबाङमा रेडियो जलजलाले वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको गायत प्रतियोगिता जलजला तारामा सनीले पनि भाग लिए र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट दशमा पुग्न सफल भए । यस्तै राप्ती आइडलमा उनी दोश्रो भए ।
विश्वकर्मा हिजो जनयुद्धले चिनिएको रोल्पालाई संगीतको रोल्पा भनेर चिनाउने अभियानमा छन् । कुनै बेला रोल्पालीले टिभी, रेडियो लोक दोहोरी गाउँदा रोल्पामा पनि गीत गाउने कलाकार छन् र ? भनर प्रश्न गरिन्थ्यो । तर अहिले समय बदलिएको छ, अन्य चर्चित रोल्पाली कलाकारहरुजस्तै उनको नाम र प्रतिभाबाट पनि सबै परिचित छन् । उनी अहिले नेपालको पहिलो लोक स्टार बिजेता बनेका छन्।
नेपालमा विभिन्न चर्चित अन्तरास्ट्रिय गायन रियालिटी शोहरुको फ्रेंचाइस भित्र्याई रहेको बेला एउटा आफ्नै संस्कृति बोकेको गायन रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार’ पनि आएको थियो।हिमाल पहाड तराई मेची देखि महाकालीका विभिन्न भेगमा गाइने मौलिक लोक भाकाको संरक्षण पनि हुने र आफ्नो पहिचानको पनि निरन्तरता हुने हुनाले यो गायन रियालिटी शोलाई छुट्टै महत्वका साथ् हेरिएको छ ।
देशभरबाट लोक गायनमा खारिएका प्रतिभा खोज्ने यस रियलिटी शो को उपाधी सनीले जितेका छन् । पहिलो लोकस्टार बन्न सफल सनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन।
प्रकाशित मिति १६ कार्तिक २०७६, शनिबार १४:४५